Yobhi 38 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
38 Waza uYehova wamphendula uYobhi ekwisaqhwithi somoya+ wathi: 2 “Ngubani na lo usitha iceboNgamazwi angenakwazi?+ 3 Khawuncede, ubhinqe esinqeni sakho njengendoda eyomeleleyo,Mandikubuze, uze wena undazise.+ 4 Wawuphi na ekusekeni kwam umhlaba?+Ndixelele, ukuba uyakwazi ukuqonda. 5 Ngubani owamisa imilinganiselo yawo, ukuba uyazi,Okanye ngubani na owawulula ulutya lokulinganisa phezu kwawo? 6 Zitshone entwenini iziseko+ zawo,Okanye ngubani owabeka ilitye lawo lembombo, 7 Xa amakhwezi+ amemelela kunye ngovuyo,Yaye bonke oonyana bakaThixo+ bakhwaza bencoma? 8 Yaye ngubani na owavalela ulwandle ngeengcango,+Olwaqalisa ukuphuma njengaxa ligqabhuka esibelekweni; 9 Xa ndabeka ilifu njengesambatho saloNesithokothoko njengesithandelo sokulubopha, 10 Ndaza ndabeka imimiselo yam phezu kwaloNdabeka umvalo neengcango,+ 11 Ndaza ndahlabela mgama ndathi, ‘Ungazokufikelela apha, ungadluli;+Yaye amaza akho adlokovayo apheleliselwa apha’?+ 12 Ngaba intsasa wayiyalela ukusukela ngemihla yakho ukuya phambili?+Ngaba nguwe owabangela isifingo sayazi indawo yaso, 13 Ukuba sibambe iziphelo zomhlaba,Ukuze abangendawo bavuthululwe kuwo?+ 14 Uziguqula njengodongwe+ ngaphantsi kwetywina,Nezinto zima endaweni yazo njengakwisinxibo. 15 Yaye ukukhanya bayakuvinjwa abangendawo,+Nengalo ephakamileyo iyaphulwa.+ 16 Ngaba ufikile emithonjeni yolwandle,Okanye ngaba uye wahambahamba+ ufuna amanzi anzongonzongo?+ 17 Ngaba amasango okufa+ atyhiliwe kuwe,Okanye ngaba unokuwabona amasango ethunzi elimnyama?+ 18 Ngaba uziqwalasele ngengqiqo iindawo ezibanzi zomhlaba?+Ndixelele, ukuba uzazile zonke. 19 Iphi na ke ngoku, indlela ukukhanya okuhlala kuyo?+Ke bona ubumnyama, iphi na indawo yabo, 20 Ukuze ubuthabathele emdeni waboNokuze uziqonde iindlela eziya endlwini yabo? 21 Ngaba uzazile na kuba wazalwa ngelo xesha,+Nangenxa yokuba lininzi inani leentsuku zakho? 22 Ngaba ungenile koovimba bekhephu,+Okanye ngaba ubona kwanoovimba besichotho,+ 23 Endibagcinele ixesha lokubandezeleka,Imini yokulwa nemfazwe?+ 24 Iphi na, ke ngoku, indlela ukukhanya okuzaba ngayo,Nomoya wasempuma+ osasazeka ngayo phezu komhlaba? 25 Ngubani owahlule umjelo ukwenzela isikhukulaNendlela yamafu esiphango,+ 26 Ukuyenza ine elizweni ekungekho mntu kulo,+Phezu kwentlango ekungekho mntu wasemhlabeni kuyo, 27 Ukwanelisa iindawo ezibethwe sisiphango neziphanzileyoNokubangela ingca ihlume?+ 28 Ngaba imvula inaye na uyise,+Okanye ngubani na owazala amathontsi ombethe?+ 29 Umkhenkce uphuma esiswini sikabani na,Ke yona iqabaka+ yezulu, ngubani na eneneni oyizalayo? 30 Amanzi azifihla ngokungathi kungelitye,Naphezu kwamanzi anzongonzongo uzenza ubumbane.+ 31 Ngaba ungayibopha iqine imixokelelwane yekroza leKima,Okanye ngaba ungazikhulula na iintambo zekroza leKesile?+ 32 Ngaba ungalivelisa ikroza leMazaroti ngexesha lalo elimisiweyo?Ke lona ikroza leAsh, ngaba ungalihambisa ecaleni koonyana balo? 33 Ngaba uyayazi imimiselo yamazulu,+Okanye ngaba igunya lalo ungalibeka emhlabeni? 34 Ngaba ilizwi lakho ungalinyusela elifini,Ukuze amanzi amaninzi akugubungele?+ 35 Ngaba ungathumela imibane ukuze iphumeIze ithi kuwe, ‘Sithi aba!’? 36 Ngubani owafaka ubulumko+ kwiingcamba zamafu,Okanye ngubani na owanikela ukuqonda+ kwizinto ezenzeka emafini? 37 Ngubani onokuwabala kanye kanye amafu ngobulumko,Okanye iingqayi zamanzi amazulu—ngubani na onokuzithulula,+ 38 Xa uthuli lugalelwa ngokungathi kukwinto etyhidiweyo,Okanye amagada omhlaba enamathela kwamanye? 39 Ngaba ungayizingelela ixhoba ingonyamaYaye ngaba unokulanelisa na iphango leengonyama ezintsha,+ 40 Xa zibuthume ezindaweni zokuzimela,+Okanye zilalele ezindaweni ezisitheleyo? 41 Ngubani olungiselela ihlungulu ukutya kwalo+Xa amantshontsho alo ekhala kuThixo efuna uncedo,Xa ebhadu-bhadula ngenxa yokuba kungekho nto yokutya?